प्रदेश १ को ३७ तहको नतिजा सार्वजनिक (सूचीसहित) - AmsancharAmsanchar
विराटनगर, २ जेठ । प्रदेश नं. १ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रममा हालसम्म ३७ स्थानको नतिजा आएको छ ।
पछिल्लो दुई दिनमा सार्वजनिक भएको चुनावी नतिजाअनुसार हालसम्म कांग्रेस १७ वटा स्थानीय तह प्रमुख र १५ वटा उपप्रमुख पद जितेर पहिलो स्थानमा छ । प्रदेशमा एमालेले हालसम्म १० वटा प्रमुख र ८ उपप्रमुख पद जितेको छ । २०७४ मा कांग्रेसले प्रदेश १ मा ५४ स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको थियो । २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेश १ मा सबैभन्दा धेरै ६९ स्थानीय तह जितेर पहिलो बनेको एमाले थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुखमा ८ र उपप्रमुख ७ वटा जितेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा जम्मा ९ स्थानीय तह जितेको उसले यसपटक ३७ वटाको नतिजा आउँदा जित संख्या ८ पुर्यारएको हो । प्रदेश १ मा अहिलेसम्म दुई जना स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रमुख पदमा जित हासिल गरिसकेका छन् । उपप्रमुख पदमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले ५ स्थान र जसपाले २ स्थानमा जित हात पारेका छन् ।
कहाँ कसले जिते ?
ताप्लेजुङकै फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका राजन लिम्बूले जित हात पार्दा उपाध्यक्षमा कांग्रेसका रबिन साम्रा लिम्बू विजयी भएका छन् । ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका विजयप्रकाश वनेम विजयी भएका हुन्। उपाध्यक्षमा गठबन्धनकै तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेदवार कमलकुमारी लिम्बू विजयी भएकी छिन् । ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका निशान्त शर्मा निर्वाचित भएका छन् । उपाध्यक्षमा कांग्रेसका सन्तोषबाबु थापा विजयी भएका छन् । ओखलढुंगाकै मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र रुम्दाली निर्वाचित भएका छन् । उपाध्यक्षमा कांग्रेसका आश्रचन राई निर्वाचित भए । ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका नवराज केसी विजयी भएका छन् । उपाध्यक्षमा एमालेकी दिलमाया मगरले जितेकी छन् । संखुवासभाको खाँदवारी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले मेयर जितेको छ । गठबन्धनका तर्फबाट मेयरमा महेश थपलियाले जित्दा उपमेयरमा भने एमालेकी महेश्वरा श्रेष्ठ विजयी भएकी छन् ।
जिल्लाको सभापोखरी गाउँपालिकामा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । अध्यक्षमा कांग्रेसका भीमबहादुर लिम्बू र उपाध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीका लक्ष्मी चापागाईं विजयी भएकी छन् । सिलिचोङ गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका भूपाल राई विजयी हुँदा उपाध्यक्षमा कांग्रेसकै देविता राई विजयी भइन् । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका हेमन्त राई र उपाध्यक्षमा जनता समाजवादी पार्टीका विनोद कुमार नेम्बाङ विजयी भएका छन् । त्यसैगरी इलामको सन्दकपुरमा अध्यक्षमा कांग्रेसका तुलाराम गु्रुङ र उपाध्यक्षका एकीकृत समाजवादीका हरिबहादुर लुंगेली विजयी भएका छन् । पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकामा गठबन्धनका कांग्रेस उम्मेद्वार बमप्रसाद लावती र उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर खड्का निर्वाचित भएका छन् ।
भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका अध्यक्षमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका थामबहादुर राईउपाध्यक्षमा कांग्रेसका वीरेन्द्र राई निर्वाचित भएका छन् । भोजपुरकै अरूण गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका शालिकराम खत्री निर्वाचित हुँदा उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेसकै बिनिता ढकाल निर्वाचित भएकी छन् । भोजपुरकै साल्पासिलिछो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दौलथकुमार कुलुङ (राई) विजयी भएका छन् । उनले नेकपा एमालेबाट बागी उम्मेदवारी दिएका थिए। उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसकी अस्मिता कुलुङ राई विजयी भएकी छिन् । भोजपुरकै आमचोक गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अशोक राई विजयी भएका छन् । उपाध्यक्षमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रकमी सीता राई विजयी भएकी छिन् । जिल्लाको हतुवागढी गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका प्रेमकुमार राई विजयी हुँदा उपाध्यक्षमा सुनिता राई निर्वाचित भएकी छन् । भोजपुरको पौवादुङ्मामा एमालेका किरण राई अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । सोलुखुम्बुको माप्य दूधकोशी गाउँपालिका अध्यक्षमा एमाले र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । अध्यक्षमा एमालेका बुद्धिकिरण राई र उपाध्यक्षमा माओवादीका गौरव राई विजयी भएका छन् ।
सोलुखुम्बुकै महाकुलुङ गाउँपालिकामा कांग्रेसका सूर्यबहादुर राईले अध्यक्ष पद जितेका छन् भने उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेसकै विपना कुलुङ विजयी भएकी छन् । सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका खिलराज बस्नेत निर्वाचित हुँदा उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेसकी अञ्जु नाछिरिङ राई निर्वाचित भएकी छन् । सोलुकै थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका असिम राई विजयी हुँदा गाउँपालिका उपाध्यक्षमा पनि माओवादी केन्द्रकै सविता राई विजयी भएकी छन् । लिखुपिके गाउँपालिका प्रमुखमा कांग्रेसकी मिनादेवी कार्की विजयी भएकी छिन् । उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेसकै डावाङ लाक्पा शेर्पा विजयी भएका छन् । सोलुखुम्बुको खुम्वु पासाङल्हमु गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । अध्यक्षमा मिङ्मा छिरी शेर्पा र उपाध्यक्षमा टासी ल्हामु शेर्पा विजयी भएकी छन् ।
तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका सञ्जयकुमार तुम्बाहाङफे विजयी भएका छन् । उपमेयरमा एमालेकै जमुनादेवी सुवेदी विजयी भएकी छिन् । तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका केशवप्रसाद भेटवाल निर्वाचित भएका छन् । उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेसकै सुनिता पहीम विजयी बनेकी छन् । आठराई गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका दिलकुमार पाहिम र उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका बलिराज इङ्नाम विजयी भएका छन् । तेह्रथुमकै छथर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका सन्तवीर लिम्बु निर्वाचित भएका छन्। उपाध्यक्षमा कांग्रेसका टेकराज लिम्बु विजयी भएका छन् । मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका यादवबहादुर खापुङ निर्वाचित भएका छन् । उपाध्यक्षमा कांग्रेसकी गीतादेवी तिम्सिना निर्वाचित भएकी छन् ।
खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका गिरेन्द्रबहादुर राई निर्वाचित भएका छन् । उपाध्यक्षमा कांग्रेसकका राजेशकुमार राजभण्डारी विजयी भएका छन्। ऐसेलुखर्कमा कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल थियो । खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका समिर राई निर्वाचित भएका छन्। उपाध्यक्षमा जनता समाजवादी पार्टीका गुरुराज राई निर्वाचित भएका छन् । खोटाङकै बराहापोखरी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेस र उपाध्यक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । अध्यक्षमा शालिकराम बन्जरा र उपाध्यक्षमा भुवलराज राईले जितेका हुन् ।
खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार अरूणादेवी राई निर्वाचित भएकी छन् । उनी यसपटक निर्वाचित हुने पहिलो महिला प्रमुख हुन्। उपाध्यक्षमा कांग्रेसका खेमबहादुर खड्का निर्वाचित भएका छन् । धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिकामा एमालेका राजकुमार लिम्बु निर्वाचित हुँदा उपाध्यक्षमा पनि एमालेकै टंकमाया पाङमी विजयी भएकी छिन् । सागुरीगढी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका जितेन्द्र राई निर्वाचित भएका छन् । उपाध्यक्षमो एमालेका मुना राई निर्वाचित भएकी छन् । धनकुटाकै छथर जोरपाटी गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार भएकाहरु नै निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षमा कांग्रेसका छत्रबहादुर लिम्बु र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकी गीता गुरुङले जितेका छन् । उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका मेजरकुमार राई निर्वाचित हुँदा उपाध्यक्षमो कांग्रेसका पुष्पलाल राई निर्वाचित भएका छन् । ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका युक हाङविर हाङ्गामले जित्दा उपाध्यक्षमा एकीकृत समाजवादी दुर्गाप्रसाद चोङबाङ विजयी भएका छन् ।